महिला हिंसाको डरलाग्दो तथ्याङ्क – Sulsule
विश्वनाथ खरेल २०७७ फागुन १७ गते १३:१४ मा प्रकाशित
नेपालमा अहिले प्रत्येक दिन ६/७ जनाहरू दैनिक बलात्कृत हुने गरेको नेपाल प्रहरी अनुसन्धान केन्द्रको तथ्याङ्कमा सार्वजनिक हुँदै आएको छ । मूलतः केन्द्रीय बाल कल्याण समितिको प्रतिवेदनअनुसार हाम्रो देशमा २०७४ चैतदेखि २०७५ असारसम्म चार महिनामा एक सय १८ बालबालिका बलात्कृत भएको सार्वजनिक भएको थियो । यसमध्ये १४ जना बालिकाको सामूहिक बलात्कार भएको छ । यसमा सेक्स, जबर्जस्ती करणी, बलात्कार, सामूहिक बलात्कार र त्यसपछि हत्या भएको थियो ।
योबाहेक नेपाल प्रहरीले सङ्कलन गरेको तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने १० भदौ २०७० देखि ९ भदौ २०७५ सम्म एक हजार ३४ जनाहरूको बलात्कारका घटनाका फस्र्ट इन्फरमेसन रिपोर्ट एफआईआर दर्ता भएको थियो । जसमा आफन्त, बिरामी, दुधे बालिकादेखि ९२ वर्षीया वृद्धाको समेत बलात्कार हुने गरेको छ । तर ६० प्रतिशत बलात्कारचाहिँ १५ वर्षमुनिका बालिकाको भएको छ । यसमा सरसर्ती हेर्ने हो भने खासगरीकन ११ देखि १५ वर्ष उमेर समूहका बालबालिकाहरू यसरी बलात्कारमा पर्न गएका छन् । यो समस्या दिनानु दिन विकराल हुँदै गएको छ ।
मुलुकमा आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा पाच सय ५९ बालिकाहरू बलात्कारको सिकार भएका थिए । त्यसैगरी गत वर्ष यो संख्या एक हजार तीन सय ९३ पुगेको थियो । यसर्थ आर्थिक वर्ष २०७०/७१ देखि २०७७/७८ सम्म आइपुग्दा अर्थात् सात वर्षमा १४ हजार महिला बलात्कृत भएका थिए । त्यसमध्ये छ हजार तीन सय ६३ बालिकाहरू रहेका छन् भने आठ हजार तीन सय ९१ बालिगहरू रहेका छन् ।
यसै क्रममा हेर्ने हो भने विगत साउन, २०७५ सालमा कञ्चनपुरकी निर्मला पन्तदेखि गत माघ २१ गते २०७७ सालसम्म आइपुग्दा बैतडीकी भागरथीसम्म राष्ट्रमा तीन हजार तीन सय ४७ बालिकाहरू बलात्कृत भएका छन् । यसभित्रमा पनि अपराध लुकाउन १७ जना पीडितको हत्या समेत भएको छ  । यो अढाई वर्षमा बलात्कारबाट पीडित तीन हजार तीन सय त बालिका मात्र हुन् । यसबीचमा छ हजार आठ सय ४४ जनाको बलात्कार भएको छ । यसरी कुल बलात्कारमध्ये आधा त बालिका नै छन्  । यसरी मुलुकको पछिल्लो साढे दुई वर्षमा बलात्कारपछि १७ जनाको हत्या भएको प्रहरीको तथ्याङ्क छ । बलात्कारको अपराध लुकाउन गत साउनयता मात्रै चार जनाको हत्या भएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७६/७७मा २ तथा २०७५/७६ मा ११ जनाको हत्या भएको थियो । त्यसपछि हालसालै बैतडीकी १७ वर्षीया किशोरी भागरथी भट्टको उनकै छिमेकी दाजुभाइ पर्ने किशोर दिनेश भट्टबाट बलात्कारपछि हत्या भएको पुष्टि भएको थियो । त्यस्तै अर्को घटना दुई वर्षअघि उखुबारीमा बलात्कारपछि हत्या गरिएकी उनको हत्यारा को हो भन्ने अझै पत्तालाग्न सकेको छैन । यी घटनाले के स्पष्ट हुन्छ भने यो देशमा छोरीले स्वतन्त्रतापूर्वक बाँच्न पाउँदैन् ।
नेपालमा महिला हिंसाको प्रहरीको तथ्याङ्क हेर्दा विगतका पाँचवटा आर्थिक वर्षमा देशमा आठ हजारभन्दा बढी बलात्कार र तीन हजार एक सयभन्दा बढी बलात्कारको प्रयासका घटना भएको देखिएको छ । सोही अवधिमा झन्डै ६० हजार घरेलु हिंसाका घटनाहरू दर्ता भएको थियो । यो डरलाग्दो तथ्याङ्क हो । यसमा कतिलाई कारबाही भयो कति स्वतन्त्रपूर्वक महिला अधिकारका वकालत गर्दै नहोलान भन्न सकिन्न । यति हुँदा पनि सरकार भने प्रतिबद्धता जनाउने प्रतिबद्ध नहुने अवस्था देखिएको छ ।
बलात्कारजस्तो जघन्य अपराधमा अपराधीले सहजै उन्मुक्ति पाइरहेको छ । सडकमा दिनहुँजसो बलात्कार र महिला हिंसाका विरुद्ध आवाज उठे पनि त्यसलाई ठोस रूपमा लिएको देखिँदैन । यसका केही ज्वलन्त उहारणहरू छन् । जसलाई सञ्चार माध्यमका अधिकारकर्मीहरूले जोडसँग आवाज उठाउँदै आएका छन् । यसमा देशका सामान्य मानिसदेखि उच्च तहका मानिसहरू बलात्कारका घटनामा मुछिएको समाचार दिनहुँ आउनुले पनि महिलाप्रतिको हेराइमा बाहिर जति राम्रो भने पनि भित्री मनमा खराब भावनाले काम गरेको पाइन्छ । महिला भनेका भोग्य वस्तु हुन भन्ने मानसिकता केही पुरुषमा कायमै रहिरहेकोले पनि आज बलात्कारका घटनामा कमी नआएको हो ।
निर्मला पन्तको बलात्कारपछि भएको हत्याको घटनामा महिला सांसद्हरूले हत्यारा पत्ता लगाउन एकै आवाजमा सभाहल घन्काएका थिए भने आज रोशनी शाहीको केसमा महिला सांसदहरू मौन रहेका थिए । यसले के देखाउँछ भने सत्ता र शक्तिको चंगुलमा अझै नेपाली माहिलाहरू रुमलिरहेका छन् भन्ने बुझिन्छ । समग्रमा भन्नुपर्दा हालसालै भएको बैतडीको दोगडा केदार गाउँपालिका वडा नं. ७ चडेपानीकी १७ वर्षीया भागरथी बलात्कारपछि हत्याको घटनामा प्रहरीलाई स्वतन्त्ररूपमा उच्च मनोबल हुनेगरी अनुसन्धान गरेको कारणले गर्दा आफ्नै भाइ पर्ने व्यक्तिबाट घटना भएको कुरा प्रहरी अनुसन्धानबाट पुष्टि भई सार्वजनिक भएको छ ।
हाम्रो समाजमा बलात्कार रातारात कतैबाट निर्यात गरिएको आयातीत वस्तु होइन, वषौँवर्ष खर्चिएर यही समाज, राजनीतिक दल, राज्य र व्यवस्थाद्वारा निर्माण गरिएको मानसिकताको उपज मात्र हो । यस्तो किसिमको घटना नियन्त्रण हुनुभन्दा बढ्दै गएको छ । नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्कअनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षमा बलात्कारको दुई हजार एक सयभन्दा बढी घटना र घरेलु हिंसाका ११ हजार सात सय ३८ वटा घटना दर्ता भएका थिए । यसको साथसाथै दुई वर्ष बढी भयो निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको थियो । तर, प्रहरीले अहिलेसम्म पक्राउ गर्न सकेको छैन् ।
धेरैपटक घटना र अपराधीको नजिक पुगेको बताउने प्रहरीले अपराधी पक्राउ गर्न सकेन वा नजिक पुगेर पक्राउ गर्ने आँट नगरेको आशंका धेरै भए । यस्ता घटनामा जनदबाब बढेका कारण अनुसन्धान गर्न सकस भएको निम्छरो जवाफ दिनेगरेको छ प्रहरीले । यस्ता किसिमका विगतमा भएका पीडादायक कुराले पीडितलाई भन्दा पीडकलाई सहयोग पुग्दै गएको छ । यसरी छिमेकी, आफन्त वा परिवार पनि बलात्कार हुने गरेको घटना बाहिरिने गरेका छन् । बलात्कारका घटना हाम्रो समाज कति क्रुर बन्दै छ ।
हरेक छोरी, बुहारी, आमा र हजुर आमाहरू पलपलमा बलात्कारका सिकार हुँदै छन् । हामी बस्ने समाजभित्र र त्यो निकृष्ट कार्य गर्दै छन् हाम्रै समाजभित्रबाट, आखिर यस्तो किसिमको घटना कहिलेसम्म हुने हो । अतः यस्ता किसिमका बालबालिकाहरूले आफ्नो आवाज दबाएर पीडा सहेर बस्नुबाहेक उनीहरूसँग विकल्प पनि छैन । यसमा जति कानुन बने पनि नारीहरूका लागि जति अधिकारका कुरा गरे पनि ती सबै कागजपत्र र कुराहरूमा मात्रै सीमित भएका छन् । देशमा भने हुने खानेहरूकै बोलवाला रहेको छ । जहाँ न्याय पनि पैसामा बिक्छ । यसर्थ धनीहरू पैसाले कानुन र न्यायलाई किनिरहन्छन् । यसरी निमुखा गरिबहरू तारिख खेप्दा खेप्दै मरिहान्छन् ।
यसर्थ एक्काइसौँ शताब्दीसम्म पनि नारीले यसरी खुम्चेर रहनुपर्ने अवस्था निश्चय पनि खेदजनक हो । नारी सुशिक्षित, सक्षम र सबल हुने वातावरण नबनेसम्म जस्तोसुकै कानुनी व्यवस्था पनि प्रभावकारी हुने देखिँदैन । यसतर्फ भने सरकारको ध्यानकता छ ? महिला हिंसा उन्मुलनका नाराहरू के ब्यानरमा मात्रै सीमित हुन त अनि नारीहरू कहिलेसम्म असुरक्षित हुने हो ? (आर्थिक दैनिकबाट)
किन अचेल बाँच्ने भन्दा मर्ने रहर हुन्छ-गजल